musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Inorasikirwa nePiyona Pioneer muMyriam St. Ange
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi
Myriam St. Ange akasuruvara kufa neMugovera, Gunyana 18, 2021, mazuva mana mushure mekuzvarwa kwake makumi manomwe nemana pachiwi cheLa Digue.
Mhuri yeSt. Ange yakanga yaungana pakushanya kweLa Digue kwemazuva maviri apfuura kuti ive pedyo nehanzvadzi yavo.
Akafa akakomberedzwa nevakomana vake, vanun'una vake, uye nemhuri dzavo mune zvainge zvakanaka.
Myriam nevanakomana vake vaviri vakashandura imba yemhuri yeLa Digue Island St. Ange kuva hotera yemhuri Chateau St. Cloud.
Myriam St. Angesi nevanakomana vake vaviri Carl naSydney Mills vakachinja imba yemhuri yeLa Digue Island St. Ange, Chateau St. Cloud muSychelles, kuita hotera yemhuri sezvo ivo vakachengetedza nguva yemakoloni yechivakwa chechiratidzo.
Myriam nevanakomana vake vakamhanya basa rakabudirira sezvo iye akaramba achitamba nzvimbo yakakosha mukusimudzira kwekushanya kwezvitsuwa.
Mhuri yeSt.Ange yakanga yaungana pakushanya kwe La Digue kwemazuva maviri ekupedzisira kuti ave padyo nehanzvadzi yavo, uye akashaya akakomberedzwa nevanakomana vake, vanun'una vake, uye nemhuri dzavo mune zvainge zvamboonekwa.
Myriam St. Ange ndiye hanzvadzi yaAlain St. Ange, aimbova Gurukota rezveKushanya, Civil Aviation, Ports neMarine ye iyo Seychelles, uye vazhinji vemhuri yake nhasi vanobudirira vatambi vekushanya muSychelles.